Banyere Anyị - Shenzhen Sinsche Technology Co., Ltd.
Njem nlegharị anya nke SINSCHE
Q usoro mkpanaka agba agba
Gburugburu Ebe obibi- Nnwale Mmiri na-ekpofu mmiri
Mmiri mmiri obodo
Ụlọ nyocha & Mmụta
Ọdọ mmiri na Spa
Nri na ihe onunu
Sinsche bụ onye nrụpụta na onye na -eweta teknụzụ zuru oke nke zuru ụwa ọnụ, emebere maka nyocha na nlekota mmiri. Emebere na 2007 na Shenzhen PR China, ndị otu anyị nke ndị ọkachamara ọhụrụ ewepụtara onwe ha maka ịzụlite na ịkwado ụzọ na ngwa ọhụrụ, iji mee ka nsonaazụ ngwa ngwa, nke ziri ezi na ọnụ ahịa dị ọnụ ahịa site na gburugburu gburugburu, ruo ụlọ nyocha ọgbara ọhụrụ.
Ndị ọrụ anyị tozuru oke nwere ahụmịhe ọtụtụ afọ na ngalaba nke Science Industrial, Analytical Chemistry na Engineering. Site n'isi ụlọ ọrụ mba ụwa dị na Shenzhen Guangdong, anyị na -enye ahịa na nkwado teknụzụ zuru ụwa ọnụ, ụlọ nyocha na mmepe, ụlọ ọrụ ọzụzụ, nrụpụta na nkwakọba ihe. Ụlọ ọrụ mpaghara na ndị nnọchi anya ya ka amarakwala ma họpụta ịnye ọzụzụ mpaghara, nkwado teknụzụ na ire ahịa mpaghara.
Na Sinsche, anyị na -agbasi mbọ ike maka ụkpụrụ kachasị elu na mbọ iji gafere atụmanya ndị ahịa anyị. Nke anyịISO9001: 2015 Asambodo na-agba mbọ hụ na anyị raara onwe anyị nye ịdị mma na nchekwa nke ngwaahịa anyị, na-ahụ na a na-enyefe ngwaahịa anyị zuru oke, n'oge, yana ọnụ ahịa asọmpi, n'ikpeazụ, na-ahụ na agaghị akụ anyị na ọrụ ndị ahịa, ọzụzụ ngwaahịa na n'ihu mgbe nkwado ahịa gasịrị. .
Ozi anyị: Ịhụ na ịdị mma mmiri maka ndị mmadụ gburugburu ụwa.
Site n'isi ụlọ ọrụ anyị dị na China anyị na -ejikwa ụlọ ahịa zuru ụwa ọnụ nke ahịa, R&D, ebe nrụpụta na nkesa iji chepụta, zụlite ma rụpụta ọtụtụ ngwa dị elu maka nyocha mmiri.
Anyị na -enye azịza ntụgharị maka nyocha gị na mkpa nleba anya gị, yana iji otu ndị ọkachamara raara onwe anyị nye anyị ga -eso gị rụọ ọrụ iji ghọta ihe ị chọrọ, nye azịza ya ma soro nkwado klaasị mbụ yana mgbe ịchọrọ ya.
Nnyocha na nyocha anyị n'ime nyocha mmiri ebutela mmepe nke Portable, Laboratory na akụrụngwa dabere na ntanetị maka nnwale ziri ezi nke oke dị iche iche achọpụtara na mmiri.
Ịga n'ihu itinye ego na ndị ọrụ nyocha na mmepe anyị na akụrụngwa na -eme ka anyị jide n'aka na anyị ga -anọ na njedebe teknụzụ kachasị ọhụrụ n'ubi anyị.
Onye na -emepụta ihe na ndị na -eweta teknụzụ zuru ụwa ọnụ, emebere maka nyocha na nlekota mmiri.